Fotoana fanehoam-pitiavana ny karemy | NewsMada
Fotoana fanehoam-pitiavana ny karemy
“Mandritra ny 40 andro fanomanantena hiatrika ny Paska, tokony hotsaroan’ireo kristianina rehetra ny ezaka telo tsara hananana”, hoy hatrany ny mompera Ramanantenasoa Manitra.
Anisan’izany ny fitiavam-bavaka izay hifandraisana akaiky amin’Andriamanitra. Ampitomboina ny fotoana hivavahana. Anaovana fanokanan-tena hahafahana mitondra am-bavaka ny hafa izay mila vonjy na mila fanohanana.
Eo koa ny fanolorantena amin’ny alalan’ny fifadian-kanina sy fandavana ny ratsy ary ny fanoherana ny fakam-panahy rehetra izay masiaka tokoa. Anisan’ny fakam-panahy ny fanokafana tsy an-kiato ny « facebook » izay mampihena ny fotoam-bavaka sy ny fanokanantena…
Ankoatra ireo ny asa fihantrana sy fitiava-namana. Raha misy azo atao, tsara ny mizara amin’ireo tsy manana. Mihantra ireo mahantra ary mampahery ny malahelo.
Fanehoam-pitiavana amin’ny mpiara-belona avokoa ireo ezaka telo rehetra tokony hananan’ny kristianina ireo. Tsy tokony hivaona araka izany na ny fihevitra na ny fihetsika na ny fiteny fa haneho fitiavana hatrany.
Takina amin’ny kristianina mandrakariva ny fahaizana mamela heloka toy izay nataon’i Jesoa Kristy ka nisoloany vaika ny fahotan’ny zanak’olombelona.
Anisan’ny sarotra ny io famelan-keloka io izay takiana indrindra amin’izao fanomanantena hiatrika ny fetin’ny Paska izao kanefa mila mahay mamela heloka mba tsy haloto fo sy hihatsaravelatsihy.